काठमाडौँ, चौथो संस्करणको प्रधानसेनापति खुला म्याराथनको उपाधि आर्मीका कृष्ण बस्नेतले जितेका छन् ।
कृष्णले निर्धारित दूरी २ घण्टा २० मिनेट ५१ सेकेण्डमा पूरा गरे । दोस्रो भएका राजनले २ घण्टा २८ मिनेट र तेस्रो भएका नवराजले २ घण्टा २५ मिनेटमा निर्धारित दूरी पार गरेका थिए । आर्मीकै खगेन्द्र भाट चौथो, विनोद सिजापति पाँचौँ, सविन तामाङ छैटौँ र भीम गुरुङले सातौँ भए । उपाधिसँगै कृष्णले रु. १ लाख २५ हजारसहित मोटरसाइकल प्राप्त गरे । दोस्रो भएका राजनले रु. ६५ हजार र तेस्रो भएका नवराजले रु. ३५ हजार प्राप्त गरे ।
हाफ म्याराथनतर्फ पुरुषमा आर्मीकै कल्याण बानियाँ पहिलो भए । उनले निर्धारित दूरी १ घण्टा ६ मिनेट ३१ सेकेण्डमा पूरा गरे । दोस्रो भएका गजेन्द्र राईले १ घण्टा ६ मिनेट ३८ सेकेण्ड र तेस्रो भएका टीकाराज कटवालले१घण्टा ७ मिनेट २३ सेकेण्डमा दूरी पार गरे ।
महिलतर्फ आर्मीकी विश्वरुपमा बुढा पहिलो भइन् । उनले निर्धारित दूरी १ घण्टा १७ मिनेट २० सेकेण्डमा पार गरिन् । दोस्रो भएकी सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ)की बिन्दा देसारले निर्धारित दूरी १ घण्टा २६ मिनेट १२ सेकेण्डमा पार गर्दै दोस्रो र तेस्रो भएकी आर्मीकी चन्द्रा रावतले १ घण्टा २१ मिनेट ३२ सेकेण्डमा पार गरिन् ।
दुवै प्रतिस्पर्धाका विजेताले रु. ५० हजार, दोस्रो हुनेले रु. ३५ हजार र तेस्रो हुनेले रु.२५ हजार प्राप्त गरेका थिए । ४५ वर्षमाथिको खेलमा धर्म महर्जन पहिलो, भीम गुरुङ दोस्रो र भीमसेन अवाले तेस्रो स्थान हात पारे । विजेताले रु. ४० हजार, दोस्रोले रु. २५ हजार र तेस्रोले रु. १५ हजार हात पारे । विजेतालाई प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालगायतले पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ।
सोही अवसरमा सेनाले आर्मीका तीन पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान गरेको थियो । सम्मानित हुनेमा एथलेटिक्सका राजेन्द्र भण्डारी, पारा एथलेटिक्सका विक्रमबहादुर राना र सुटिङका टीकाराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई जनही रु. २५ हजार ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।
जङ्गी अड्डाबाट शुरु भएको दौड त्रिपुरेश्वर, थापाथली, बानेश्वर, तिनकुने हुँदै भक्तपुर सूर्यविनायक पुगेर पुनः जङ्गी अड्डमै आएर सम्पन्न भएको थियो ।